Istaraatiijiyadda Mashiinka Raadinta Miyay Keenday Super Bowl-kii 2012 Indianapolis? | Martech Zone
Istaraatiijiyadda Mashiinka Raadinta Miyay Keenday Super Bowl-kii 2012 Indianapolis?
Wednesday, May 21, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maya, laakiin waxaan jeclaan lahayn inaan ka fikirno inay xoogaa saameyn ku yeelatay. Waan ognahay in dadaalladeenna, ugu yaraan, ay saameyn ku yeesheen natiijooyinka mashiinka raadinta. Waqtiga lagu dhawaaqay, The Our Super Bowl 2012 goobta kama jirin wax SERP ah - laakiin ogeysiiska, waxaan ahayn magaalada kaliya ee leh goob natiijooyinka mashiinka raadinta.
Waxay noqon kartaa mid sarreysa, laakiin mid ka mid ah yoolalka aniga iyo Pat Coyle aan leenahay goorta cusub bilaabay Super Bowl websaydhka waxay ahayd inuu hubiyo in websaydhka uu ka sarreeyo matoorada raadinta oo wuxuu ahaa degel caan ka ah webka. Waxay ahayd - walina waa.
Waan ogeynay in NFL fiiro badan ma siinin internetka - laakiin waxaan dooneynay in qof kasta oo kale uu arko Indy oo keliya markii ay la yaabeen cidda xigta ee martigelineysa. Taasi waa sababta aan habeenkii oo dhan u soo jeeday si aan u hagaajiyo websaydhka iyo Pat wuxuu dhisay istiraatiijiyad wadareed si loo dalbado ra'yi iyo wadahadal dhammaan goobaha kale ee gobolka IndyMojo, The Starapolis Star, Waxaan Doortay Indy, Yar IndianaIWM, oo waxaan codsanay caawimaadda kuwa kale baloogyada gobolka si loo faafiyo.
Waxaan xitaa bilownay a Super Bowl 2012 Youtube Channel si aad si tartiib ah ugu riixdo fiidiyowyada. Si goobta loogu noolaado matoorada, waxaan kala soo baxnay quudinta dhammaan wararka gobolka iyo baloogyada iyadoo loo marayo Yahoo! Dhuumaha ku jira bogga.
Markii warka uusan is beddelin, fiidiyowyadu waxay ahaayeen. Waxay ahayd weerar isdaba joog ah, oo aan kala joogsi lahayn oo ku saabsan waxyaabaha ka soo baxa iyo backlinks si loo isku dayo in goobta loogu sii hayo radar iyo "Indianapolis" marka loo eego "Super Bowl" iyo "2012" ee boggaga natiijooyinka. Hal abuur cusub ayaa si xeeladeysan u fuliyay istiraatiijiyadda - hagaajinta iyo hagaajinta waxyaabaha loo baahan yahay.
Erayada furaha ahi waxay noo keeneen taraafiko badan, taraafikada oo hadda sii fiiqaysa hadda markii Indianapolis la doortay:
Gaadiidka hadda socda ayaa ka soo wareegay ~ 150 booqasho maalinle ah oo loo rogay 9,000 booqasho:
Hagaag, malaha Dennis Hopper ayaa caawiyay!
Ka eeg nooca qaraarka sare ee fiidiyowgan barta Our Super Bowl 2012 website.
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu weyn ee tan ay ahayd in koritaanka goobta iyo meelaynteeda lagu dhammaystiray dhammaan xeeladaha cad-cad (ee aan shar ahayn). Erey fudud oo ah suuqgeynta afka, naqshadeynta goobta weyn, meeleynta waxyaabaha ku jira, baloogyada, iyo warbaahinta bulshada, iwm - istiraatiijiyad dhameystiran - waxay noqotay mid guuleysatay. Waxay ahayd olole weyn waxaan rajeyneynaa inaan qeyb yar ka ciyaarnay dadaalladii lagu keenay Super Bowl-ka Indianapolis!
Waxa ugufiican dhamaan, uma aysan baahnayn dadaal badan - kaliya istiraatiijiyad badan oo dhanka hore ah ka dibna hubinaysa in istiraatiijiyadda si joogto ah loo fuliyay. Mahad gaar ah Mark Miles iyo Pat Coyle oo ii ogolaaday inaan caawiyo kooxda. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa hal-abuurka u dulqaatay wax ka beddelka iyo saqda dhexe saqda dhexe - way fiicnaayeen
Tags: 2012 super baaquliayna search engineSEOiyo maddiibad super
Sanadkii 2008 NRA Tech Pavilion oo lagu iftiimiyay Soo Bandhigid Dijital ah
May 21, 2008 at 7: 20 PM
Shaqada cajiibka ah DHAMMAAN kuwa waqtiga u qabtay inay ka dhigaan guushan weyn Indianapolis ayaa dhacaya toddobaadkan. Doug, waxaad tahay halyeygayga.
May 21, 2008 at 7: 48 PM
Waad ku mahadsantahay kaalmadaada sidoo kale! Waxaan ahaa qayb aad iyo aad u yar oo dadaalkaan ah. Waxaan u maleynayaa inaan jiiday hal-nighter oo aan kaqeyb galay shirar kooban. Xubnaha kale, oo ay ku jiraan kooxda websaydhka ee 'Innovative', ayaa geliya, saacado badan toddobaad kasta.
Waxay ahayd madadaalo! Iyo hogaaminta ilaa 2012 waxay noqon doontaa mid cajiib ah!
May 21, 2008 at 7: 32 PM
Waxaan la yaabanahay inaad wada doorteen our2012sb halkii aad ka dooran lahaydeen
May 21, 2008 at 7: 50 PM
Qabasho wacan, Istefanos. Dhab ahaantii magaca domainka iyo naqshadeynta websaydhka ayaa la sameeyay ka hor intaanan Pat iyo anigu fuulin. Waxay ahayd inaan la shaqeyno waxa meesha yaal halkii aan mari lahayn wadadeena. Waxaan jeclaan lahaa - runtii - inaan doorto degmo ku dhex jirtay "2012" iyo "super" iyo "baaquli" Oo waxaan u maleynayaa in barta ay ku dhex jiri laheyd cinwaan hoosaad loo yaqaan "indy". 🙂
Oh, iyo hambalyo!
May 21, 2008 at 7: 51 PM
Mahadsanid! Waxay ahayd dadaal bulsho - oo ay ku jiraan baraha bulshada iyo dadka wax ku qora bogagga gobolka oo dhan! Qof kasta oo waqti ku qaatay in wax laga qoro wuu ku darsaday.